Circulation, Board Madagascar
Fiara 4x4 iray iray no nisongona citerne tamin'iny lalam-pirenena faha-2 iny, mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina.
Nifatratra tamin'ny taxi-brousse cotisse nefa ity 4x4 vao nisongona ilay camion, soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy.
Publiée le 30 août 2017 par rastefa
Potika tanteraka ny fiara roa tonta noho ny fandehanana mafy loatra. Samy tsy nisy nandraisana ny lohan'ireto fiara 4x4 sy taxi-brousse ireto. Teo amin'ny manodidina ny tanànan'Antetezambaro no niseho ny loza ka notanterina haingana tany amin'ny hop... Lire la suite
Publiée le 24 août 2017 par lita
Niteraka fitohanan'ny lalana tamin'iny digue iny vao maraina ity fiara iray izay tena simba tanteraka noho ny lozam-pifamoivoizana.
Samy talanjona ny mpandalo mahita ity fahasimban'ity fiara ity.